Hevitra MPANOHARIANA | Finoana | 3
Voaompa nefa tsy mihemotra ny Mpitondra Fivavahana
2010-03-10 @ 21:01 in Finoana
Nivaly sahady mialoha ny famalian'ny Kaominina andrenivohitra Antananarivo ny valinteny avy amin'ny Prefektioran'ny polisin' Antananarivo. Araka ny nolazain'ny iray amin'ny mpitarika ao amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana dia tokony ho ny ao amin'ny fitantanana an'Antananarivo aloha no mamaly na tsia amin'ny hanekena ny fangatahan'ny Hetsiky ny mpitondra fivavahana ny kianjan'Ambohijatovo, nefa moa dia tsy vitan'ny hoe nisongona namaly ny hafa ny Prefe fa anao teny an'avona sy maneso ary nihantsy mihitsy aza.
Rehefa nanaraka ny votoatiny novakian'ny mpitandrina iray aho dia misy toy izao: "...ekena tokoa fa ilaina ny fibebahan'ny firenena ary mila vavaka ny firenena, saingy efa misy ny toerana natokana ho amin'izany dia any amin'ny isam-piangonana tsirairay avy, koa tsy ilaina ny fanaovana vavaka ankalamanjana; fa raha mangataka ny hanao akalamanjana ihany ary dia aleo akatona ny fiangonana fa eny ankalamanjana indray no atao ny fiangonana..." Dia tahatahaka izay no votoatin'ny valinteny nataon'ny Prefe araka ny fihaino azy tamin'ny radio fahazavana.
Mazava ny valintenin'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana manoloana izany valinteny izany. Ampirisihana ny rehetra hiakanjo fotsy na hitondra famantarana fotsy ny tontolo andron'ny Alakamisy hiadiana amin'ny tsy fahamarinana fa hitady ny fahamarinana kosa. Hisy ny fotoam-pivavahana maraina manomboka amin'ny fito ora ao amin'ny FJKM Ambatomena izay eo ampitan'ny Consulat General de France io Alakamisy 11 marsa maraina io. Hotontosaina amin'ny Asabotsy 13 marsa fa tsy mbola misy fiovany ny fotoam-pivavahana eny Ambohijatovo... na dia efa mazava aza ny fanakanana avy amin'ny Prefektioran' Antananarivo. Efa ela, hoy ry zareo, ny nandeferana fa ny amin'ny Asabotsy 13 marsa kosa dia hotontosaina. Mazava manko ny fanakanana fa tsy ilaina mihitsy ilay fotoana ka tsy mila tanterahina. Samy hitana ny teniny ve ny roa tonta sa hisy ny hihemotra?
Marihiko fa mandeha dia mandeha mihitsy ny fifanentanana eo amin'ny samy olona hitondra izay mari-pamantarana fotsy izay na dia any amin'ny toerana heverina tsy ankasitrahan'ny mpivavaka loatra aza. Henoko tsara io ka tsy fantatro loatra na mifananihany ry zareo na tena matotra ny resaka satria olondehibe avokoa ireo miresaka ireo.
Jentilisa, 10 marsa 2010, amin'ny 23:10
Volana imaso tsy mba kilema
2010-02-20 @ 21:52 in Finoana
Misy ny ohabolan-drazana manao hoe manalasala toa vozon'akoho, ariana toa hena, hohanina toa taolana. Toa izany no fijeriko ny hamaroan'ny olona (na ny havitsiany, araka ny fomba fijery) tonga teny Antsonjombe ny andron'ny Asabotsy 20 febroary 2010. Izao manko: Afaka miteny soa aman-tsara sady maneso ireo izay tsy mankasitraka ny hetsika manao hoe vitsy ny olona nanatrika tany. Afaka miteny soa amantsara ihany koa anefa ireo mpanaraka ny hetsika milaza hoe betsaka ireo olona tonga ireo. Tsy diso velively ny mpitarika raha nilaza hoe: "Raha tany amin'ny kianjan'Antsahamanitra isika dia tsy antonona ny kianja" sy ny hoe "Efa betsaka isika ireo fa mbola tsy ampy!"
Marihina fa ny mpanoratra dia niserana ihany noho ny asa aman-draharaha tsy azo bangana olona. Efa tsy niasa ihany manko ny tena ny alakamisy 18 febroary 2010 tontolo andro nanatontosa ilay androm-bavaka sy fibebahana, ary nanao ny fifadian-kanina ihany koa. Tamin'ity andro Asabotsy ity kosa dia ny mitataovovonana ihany no teny nanomboka tamin'ny 12:10 ka hatramin'ny 13:35,izany hoe nandingana sakafo atoandro, nefa ny tena fotoana dia amin'ny 14:00 vao manomboka. Ny fanafanana fotoana sy ny asam-pandroahana ny asan'ny maizina ihany noho izany no natrehina. Indrisy moa fa maro tamin'ny namana fantatra ihany koa no tsy afaka tamin'ity fotoana iray lehibe ity.
Teo am-pahatongavana niala tamin'ny fiara fitaterana aho dia gaga tamin'ny hamaroan'ireto fiara lehibe dimy an'ny mpitandro ny filaminana feno an-dry zalahy sy fiara tsy mataho-dalana iray ka izy rehetra ireo dia mirongo fitaovam-piadiana fitondra miady fa tsy fitandroana filaminana velively. Ny fiara lehibe roa aza moa dia kely foana tsy nibahanany ny vavahady fidirana mankao an-kianja izay tokana ihany moa. Ry zalahy koa mikarenjy etsy sy eroa miaraka amin'ny basy ka mahasadaikatra ny olona ny hifanena aminy. Nisy aza moa rehefa iny tonga teo iny ilay fiara fitaterana nitondra ahy no loa-pahatezerana mihitsy ny sasantsasany amin'ireo vehivavy tao anaty fiara nahita azy ireo. Tsy dia nahagaga loatra noho izany raha nadiodio izany hoe tsy nisy olo-tsotra loatra teo am-bavahady fidirana fa nihatakataka lavitra angaha. Ren'ny mpitondra fivavahana angaha izany toe-javatra izany, na nisy no niantso azy ireo tamin'ny finday manontany raha misy marina ny fotoana na tsia, ka nahatery azy ireo nizara programa ireo miaramila rehetra hitany teny ivelany ireo sy niangaviana ireo miaramila somary hihatakataka kokoa. Nanaiky izany ny mpitandro ny filaminana ka nanakisaka ireo kamiao tany ho any amin'ny 80 metatra andrefan'ny vavahady fidirana. Vita izany rehetra izany vao somary nisy olona nivezivezy teo am-bavahady.
Tahatahaka ny ahoana moa izany ireo karazan'olona tonga tamin'ity fotoam-pivavahana ankalamanjana ity? Raha atao indray mitopy maso ny nisongadina dia ireo efa zokiolona indrindra ny vehivavy no tena misongadina avy hatrany. Ireo no misy mpinamana angaha ka hitahita ho misy miarakaraka na manao andiany. Ny lehilahy efa zokiolona kosa matetika ny hita eny dia mandeha tsirairay no tena maro. Manaraka izany indray amin'ny hamaroana ireo somary fianakaviana kely ka olon-dehibe omban-janaka na zafikely, ary tena mbola zaza tokoa ireo manaraka ireo. Avy eo vao ny tanora matotra izany hoe ireo mananontanona na mihoatra ny 30 taona no maningatsingana teny ho eny ka miaraka amim-bady na main'olo-tiana fa tsy miaraka andiany toy ny mpinamana. Tsy tena tsipalotra kosa izany hoe tanora matotra mpinamana maromaro niaraka ho amin'ity fotoam-pivavahana ity izany.
Ny vitsy an'isa indrindra tadiavina mihitsy vao mety ahitana dia ny zatovo vatombatony feno taona hifidy na ankatoka ho amin'izany. Fahabangana lehibe ny tsy nahitana loatra ity sokajin'olona notononiko farany ity. Izany hoe azo heverina fa tsy vaindohan-draharaha ho azy ireo mihitsy ny karazan-javatra tahaka ny natao tamin'ny andron'ny Asabotsy ity. Isika Malagasy anefa dia firenena maro an'isa ny tanora ary mandrafitra ny ampahany betsaka mihitsy aza. Azo lazaina manko hoe fotoam- pivavahana kapomanta fotsiny no teny fa tsy nasiana na tsy nolazaina mihitsy kosa ny hisiana karazana rindran-kira evanjelika. Raha iretsy maro an'isa tonga iretsy dia mazava tsara fa tonga dia ny ventin-dresaka sy ny votoatin-draharaha no tena anton-diany fa tsy miraharaha loatra intsony izay endrin-javatra manintona. Tsy mahasarika ny zatovo loatra anefa ny toy izany araka ny fijeriko, ka tsy mahagaga loatra raha tsy hita tamin-javatra tahaka itony ireo zatovo 20 ka hatramin'ny 30 taona eo ho eo ireo.
Aiza ho aiza noho izany ny heveriko ho lesoka mila harenina ho amin'ny manaraka? Sarotra be ny miresaka azy ity satria mety azo sokajiana hoe ravindraviny hanintonana fihetseham-po na mampientanentana no tsy natao mihitsy; singaniko amin'izany ny hira ataon'olo-tsotra na ataon'ny antoko mpihira. Ny karazana foto- pisainana protestanta, ananan'ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana mandrafitra ity hetsika ity, dia manifika avy hatrany izay mety ho tsy dia ilaina loatra ho amin'ny fanamafisana na fijoroana amin'ny finoana ary matetika moa dia ireny antsipirian-javatra ireny no mahatriatra ny dia mandrakariva. Azoko heverina anefa fa azo ifampiresahana tsara ry zareo hijery manokana ny eo amin'ity lafiny hira ity hahatonga ny zatovo hahatapa-kevitra sy hazoto fa hanatrika sy handray anjara amin'ny hetsika amin'ny manaraka.
Faharoa manarakaraka izany dia tsy ampy mihitsy ny fanentanana, ary fantatry ny ao amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana tsara izany. Ny radio fahazavana irery ihany no nanaovana fanentanana ho amin'ny fotoana tahaka itony, izany hoe mba manana ny lanjany ihany izany ilay radio na dia maro aza ny faritra tsy mahazo tsara azy io na dia eto an-drenivohitra izao aza, ka tsy atao mahagaga raha mismisy ihany ny tsy mahalala akory ny fisian'ity fotoam-pivavahana ity. Efa hitan-dry zareo mpitarika moa iny ka ho hita eo amin'ny manaraka. Mbola banga amin'ny fanentanana ihany koa ny fifanentanan'ny olona hanatrika ny fotoana. Izay tena resy lahatra sy mazoto ihany no tonga, saingy tsara halalinina kokoa angaha ny fahasahian'ny olona hitarika ny namana ho tonga amin'ny fotoana tahaka ireny... tsy hanery ny olona handeha na ho tezitra amin'izay tsy handeha fa handresy lahatra ho amin'ny fiaraha-mientana kosa.
Toro-hevitra ho an'ny mpitarika noho izany ny hakany tarika mpihira evanjelika mihitsy na handray an-tanana ny fanangonana sy fampivoriana ary fanentanana ireo tanora mety hananganana antoko mpihira "vonjimaika" ho an'ny hetsika fa heveriko ho lalana iray hahatonga fifanentanana eo amin'ny samy tanora io ka hameno tsikelikely ny banga sy hampiroborobo ny hetsika. Tsy maintsy manana mpitarika hisahana lafiny hira na zavakanto noho izany ny ao amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana raha mbola ho lalandavitra ity hetsika ho amin'ny fampijoroana ny fahamarinana ity. Izay aloha no voasoratro etoana ho fanavazavana ho anareo mamadibadika te-hahafantatra ny fandehan'ny zavamisy aty Madagasikara fa raha ny tena manokana aloha dia ao anatin'ireo tsy afa-po loatra... sady tsy afa-nanatrika ny ventim-potoana rahateo moa. Hofaranako amin'ny fomba fiteny malagasy indray angaha izy ity tahaka ny nanombohako azy ka hanoratako hoe ataovy toy ny voankazo an'ala izay voasoratra izay, ny mamy atelemo ary ny mangidy kosa aloavy. Sa inona hoy ianareo no tokony hatao?
jentilisa, Alahady 21 febroary 2010 amin'ny 00:00